Huawei Watch GT2 Pro FreeBuds Pro ANC တို့မှာ ဘယ်လို Features အသစ်တွေပါလာမလဲ? — Anycall Mobile
Huawei Watch GT2 Pro FreeBuds Pro ANC တို့မှာ ဘယ်လို Features အသစ်တွေပါလာမလဲ?
By liam September 12, 20202Mins Read
Huawei အနေနဲ့ Europe မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ Seamless AI Life Launch event မှာ သူတို့ရဲ့ IoT ( internet of things) ပစ္စည်းအသစ်တွေဖြစ်တဲ့ Huawei Watch GT2 Pro and FreeBuds Pro ANC တို့ကိုမိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ Huawei Watch GT2 Pro ဟာဆိုရင် Classic ၊ Sports နှစ်မျိုးထွက်လာပြီး FreeBuds Pro ကတော့ ANC( Active Noise Cancellation) နဲ့ထွက်လာပါတယ်။
Huawei Watch GT2 Pro မှာ Premium ဆန်တဲ့ Sapphire Glass ကိုတပ်ဆင်ပေးထားပြီး GT2Watch လို စက်ဝိုင်ပုံစံ ဒိုင်ခွက်ကိုပဲဆက်သုံးပေးထားပါတယ်။ Display မှာ 454 x 454-pixel resolution ရှိတဲ့ 1.39-inch OLED display ကိုသုံးပေးထားပါတယ်။ နာရီရဲ့ဘေးဘက်မှာတော့ Control ခလုပ်အနေနဲ့သုံးလို့ရမယ့် ခလုတ်နှစ်ခုပါဝင်ထားပါတယ်။
Huawei Watch GT2 Pro ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်အတွက် Kirin A1 chipset ကိုသုံးပေးထားပါတယ်။ Storage မှာတော့ 32MB RAM ၊ 4GB Onboard Storage ကိုထည့်ပေးလာပါတယ်။ GT2 Pro ဟာ Workouts ပေါင်း ၁၀၀ ကျော်ထိ Track လုပ်ပေးနိုင်ပြီး နှလုံးခှုန်နှုန်း ၊ အိပ်ချိန် ၊ သွေးတွင်း Oxygen တို့ကိုတိုင်းတာပေမယ့် TruSeen 4.0+ လည်းပါလာပါတယ်။ တစ်ခြား Feature တွေအနေနဲ့ built-in GPS Compass ၊ Music Playback တို့ပါလာပါတယ်။
Battery မှာတော့ ပုံမှန် Usage လောက်ပဲသုံးမယ်ဆိုရင် ၁၄ ရက်ထိ Battery Life ရမှာဖြစ်ပြီး GPS ဖွင့်ထားပြီးသုံးရင်တော့ 30hrs အထိရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Music Playback ကတော့ 24hrs အထိရမယ်လို့ Huawei ဘက်ကဆိုထားပါတယ်။ Charging မှာတော့ Qi Wireless Charging ထောက်ပံ့ပေးထားပါတယ်။ နောက်ထပ်5မိနစ်အားသွင်းရုံနဲ့ ၁၀ နာရီထိသုံးလို့ရမယ်လို့ Huawei ကဆိုထားပါတယ် ။GT2Pro ရဲ့ Software မှာတော့ Huawei ရဲ့ကိုယ်ပိုင် LiteOS နဲ့ run ပေးထားပါတယ်။
Huawei Watch GT2 ရဲ့ဈေးကတော့
Sports – €329 ( မြန်မာငွေ ၅ သိန်း ၂ သောင်းဝန်းကျင်)
Classic – €349 ( မြန်မာငွေ ၅ သိန်း ၆ သောင်းဝန်းကျင်) ခန့်ကျသင့်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ Version နှစ်မျိုးစလုံးကိုတော့ Sept လကုန်လောက်မှသာစဝယ်လို့ရမယ်လို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Huawei FreeBuds Pro ကတော့ Active Noise Cancellation နဲ့အတူ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်လိုက်ပြီး Audio Output Quality ကိုထိန်းညှိပေးမယ့် Dynamic Profiles တွေနဲ့ပါလာပါတယ်။ Dynamic Profiles ထဲမှာ ‘Cozy’, ‘General’ and ‘Ultra’ ဆိုပြီး Modes တွေပါလာ ပါတယ်။
အသံပိုင်းအတွက် F 11mm Drivers ကိုထည့်ပေးထားပြီး Microphone သုံးလုံးကိုထည့်ပေးထားပါတယ်။ နောက်ထပ် Audio Calls ပိုင်းမှာပိုကောင်းစေဖို့ Voice Enhancement Feature ကိုလည်းထည့်ပေထားပြန်ပါတယ်။
Battery မှာတော့ Charging Case အပါအဝင် ANC မသုံးဘဲထားရင် 30 hours Battery Life အထိရမှာဖြစ်ပြီး ANC ဖွင့်ထားရင်တော့ 20 နာရီအထိ Battery Life ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
FreeBuds Pro ရဲ့ဈေးကတော့ €199 (မြန်မာငွေ ၃ သိန်း ၂ သောင်းဝန်းကျင်) ကျသင့်လာမှာဖြစ်ပြီး အရောင်အနေနဲ့ Black, White , Silver သုံးရောင်ဝယ်ယူလို့ရမှာပါ။ FreeBuds Pro ကိုတော့ October လလောက်မှသာစတင်ဝယ်ယူလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကိုတော့ Mate 40 Series နဲ့အတူရောက်လာဖို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။
GT2 Watch ProHuaweiHuawei FreeBuds Pro